♥ILOFT YELANGA |Iloft enomtsalane w/t yokupaka ♥ - I-Airbnb
♥ILOFT YELANGA |Iloft enomtsalane w/t yokupaka ♥
I-loft yonke sinombuki zindwendwe onguLi.Home
Ilungele ukonwabela imozulu entle yesixeko sethu kunye nomda waso ongapheliyo wenkulungwane yeshumi elinesithoba, i-SUNSET LOFT yindlu yesitudiyo sothando ejonge kwi-iconic "TERRAZZA MASCAGNI" enembono eyahlukileyo yokutshona kwelanga kweMeditera.
Indawo yokupaka yabucala, i-intanethi engenazingcingo, i-smart TV, ikhitshi eligcweleyo eline-dishwasher, isilingi / umgangatho, imigangatho yeplanga kunye negumbi lokuhlambela elikhulu elinokukhanya kwesilingi ligqibezela umfanekiso wokuhlala kwezothando nokuphumla.
Igumbi lokulala eliphindwe kabini elitofotofo, umgangatho weplanga, ifestile enkulu ephindwe kabini enombono wolwandle oyi-180°, iWi-Fi, iSmart TV, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, iA/C, idizayini yokucofa, igumbi lokuhlambela elitsha elinesibhakabhaka esine-domotic kunye neendawo zokupaka zabucala ezinebha yokungena ngokuzenzekelayo.
4.80 · Izimvo eziyi-229
Ulungile phambi kweMascagni Terrace, enye yezona zikwere zihle kakhulu e-Italiya, entliziyweni ye-promenade yolwandle kodwa isondele kakhulu kumbindi wesixeko, ngaphantsi kwemizuzu eyi-10 ukusuka kwizikhephe, iindawo zokumisa iibhasi ezimbalwa ukusuka kwisikhululo kwaye Imizuzu engama-25 ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya sasePisa.
Uya kuba nomgama omfutshane, phakathi komgama wokuhamba, iindawo zokutyela, imivalo, iiklabhu kunye neevenkile.
Ulwandle lwe "Tre Ponti" lwabathandi bezemidlalo yimizuzu eyi-7 ukusuka endlwini, okanye iibhasi ezi-2 zokumisa iibhasi, ixabiso elimangalisayo leCalafuria, kunye namanzi ayo e-crystal blu, yimizuzu eyi-10 ngemoto okanye iibhasi ezimbalwa zokumisa kude.
Umbuki zindwendwe ngu- Li.Home
Ngaba kukho nawuphi na umbuzo, inkxalabo okanye isicelo? Sisoloko sifumaneka nge-sms, i-airbnb, ifowuni okanye i-WhatsUp ngaphakathi kweyure
Sikunye nomhlobo wethu kunye nompheki u-Enrico sinikezela ngamava kwi-AIRBNB ----> I-FUNKY FRESH PASTA
ikhosi yokupheka ipasta entsha enobuchule neyonwabisayo, ukuba unomdla qhagamshelana nathi ngokufumaneka kunye nezaphulelo kubathengi bethu